Wasiir hooyo Soomaaliyeed lacag ka dhacay oo xilkii laga qaaday | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiir hooyo Soomaaliyeed lacag ka dhacay oo xilkii laga qaaday
Waraaq ka soo baxday Xaafiiska Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle ayaa xilkii uu hayay looga qaaday Xasan Maxamed Cilmi, kadib markii lagu eedeeyay inuu dhacay lacag dad dan yar ah.
JOWHAR, Soomaaliya – Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe, ayaa xilkii ka xayuubiyay Wasiir Ku Xigeenkii Wasaarada Amniga Hirshabeelle, Xasan Maxamed Cilmi, kadib markii baraha bulshada lagu faafiyay qoraal ay qortay maamo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo, Hodon Ibraahim Caamir, taas oo sheegtay inuu Xasan Maxamed ka dhacay lacag ku dhow $1500, Kun iyo Shan boqol oo doolar.
Qoraalka maamada lacagta laga dhacay ee baraha bulshada aadka ugu faafay, ayay ku xustay in kadib markii dhaqaatiirtu ku war galiyeen in gabar ay dhashay oo xanuunsan aan dalka waxba looga qaban karin ay raadisay dal ku galka Turiga, ninka lacagta ka dhacyna uu u sheegay in uu u soo saarayo Visa-ha si deg deg ah.
“Ninkaan ayaa igu yiri aniga ayaa Visa-ha kuu soo saaraya maadaama uu ahaa Wasiir ku xigeenka amniga Hirshabelle, Hassan Mohamed Elmi, wuu iska keey daba wareejiyay muda gareyso saddex bilood waxuu igu yiri visa kuma hayo lacagna kuma hayo ugu danbeyn”. Ayay tiri Hodon Ibraahim oo dhibane ah.
Waxa ay Madaxda Maamulka Hirshabeelle ka codsatay in cadaaladda la hor keeno Wasiir Ku Xigeenka, Xasan Maxamed Cilmi, kaas oo ugu danbeyn uu xalay xilli danbe xilkii ka qaaday MW Cali Guudlaawe.